हेर्नुस त कोमल वली त दुलईको भेषमा चिरीच्याट्ट पर्नु भएछ नि | नेपालको सम्झना
Browse » Home » कुराकानी » हेर्नुस त कोमल वली त दुलईको भेषमा चिरीच्याट्ट पर्नु भएछ नि
हेर्नुस त कोमल वली त दुलईको भेषमा चिरीच्याट्ट पर्नु भएछ नि
तपाईं दुलहीको लुगामा सजिन खासै रुचाउनुभएन नि ?
मलाई थाहा छ, बेहुलीको भेषमा म निकै राम्री देखिन्छु　। सबैले 'कस्ती राम्री देखिएकी,' भनेर जिस्क्याउँछन् पनि　। त्यसैले लगाउन मन नलागेको　। मलाई भेट्ने सबैले विवाहबारे सोध्छन्, 'बिहे कहिले गर्ने ?' उनीहरूलाई जवाफ दिँदा-दिँदा म थाकिसकेँ　। यो लुगामा देखिएपछि मैले अनेकखाले प्रतिक्रिया बेहोर्नुपर्छ　।
योभन्दा पहिले बेहुलीको लुगा लगाउनुभएको थियो ? यो लुगामा राम्री देखिन्छु भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो ?
दुलहीको लुगामा सबै नारी राम्री देखिन्छिन्　। यसभन्दा पहिले म्युजिक भिडियो सुटिङका वेला मैले यो लुगा लगाएकी थिएँ　। पछि, त्यो भिडियो हेरेर म आफँै दंग परेकी थिएँ　। एउटा रमाइलो कुरा, त्यस भिडियोमा म दुलही बनेको देख्दा मेरा आफन्त र साथीहरू रोएका थिए रे　। मलाई माया गर्ने साथीहरू मेरो यो फोटो देखेर फेरि रुनेछन्　।
आज बिहेको यो लुगा लगाउँदा कस्तो लाग्यो ?
रमाइलो　। एकपछि अर्को पहिरन लगाउँदै, शृंगार गर्दै जाँदा आज म साँच्चिकै दुलही बन्दै छु कि जस्तो अनुभूति भइरहेको छ　। मेरो मुटु नै ढक्क फुलेजस्तो, कता-कता डर लागेजस्तो भएको छ　। म त साँच्चिकै दुलही बनेर बिहे गरेर कतै जाँदै छु कि जस्तो अनुभव हुँदै छ　।
यो लुगामा मन परेको कुरा (जस्तो चुरा, सिन्दूर, साडी) के हो ?
सबै लुगा र शृंगारका साधन मन परेको छ　। किनभने बेहुली हुन सबैको उत्तिकै महत्त्व छ　। यी पहिरन मैले निकैपटक लगाएकी छु　।
पहिलोपटक तपाईं कुनै दुलहीको नजिक कहिले बस्नुभएको थियो ? त्यसवेला कस्तो लागेको थियो　?
स्कुलदेखिको मेरी साथी थिइन् तुलसीपुरमा, उनी मेरो बेस्टप|mेन्ड　। उनको बिहेमा उनलाई शृंगारमा सघाएकी थिएँ　। उनी दुलही बनेको देख्दा मलाई पनि दुलही बन्न मन लागेको थियो । तर, मेरो उद्देश्य अर्कै थियो　। फेरि मेरो दिमागमा त्यस कुराले त्यति महत्त्व पाएन　। अहिले सम्झँदा लाग्छ- त्यो मेरो 'इम्याचियोरिटी' थियो　।
बिहे गरेको भए तपाईंको लक्ष्य पूरा हुँदैनथ्यो त ?
हुन पनि सक्थ्यो　। तर, हाम्रो समाज र मेरो पारिवारिक बनावटका कारण मेरो उद्देश्य पूरा नहुने सम्भावना निकै थियो　।
बिहेमा यस्तो पहिरन नै किन लगाइन्छ ? यो आवश्यक नै छ र ?
किनभने हिन्दूधर्म परम्पराअनुसार हरेक धार्मिक अनुष्ठानमा रातोलाई शुभ मानिन्छ　। त्यसैले सबै शुभकार्यमा रातो रंग प्रयोग गरिने चलन निकै अघिदेखि छ　। बिहे त झन् दुई आत्मालाई एक बनाउने शुभकार्य हो　। विजयको प्रतीक पनि हो रातो रंग, प्रेमको प्रतीक पनि　। रातो रंगले मानिसलाई ऊर्जा पनि दिन्छ　।
तपाइंले जीवनभरि नै यस्तो पहिरन लगाउने वेला भयो नि ? किन नलगाएको ? ढिला भएन ?
आज लगाएकी छु नि　। यतिले पुगेन र ? लगाउँला नि　। त्यो दिन पनि छिट्टै आउनेछ　। ढिला भएको छ कि छैन त्यो त मान्छेको हेराइमा फरक पर्छ　।
तपाइंले आजसम्म कोही आदर्श दुलही देख्नुभएको छ ?
आदर्श केलाई मान्ने ? मान्छे कुनै कुरामा पूर्ण हुन सक्दैन　। तपाइंले पूर्ण देख्नुभएको मान्छे अर्कोलाई अपूर्ण लाग्न सक्छ　। त्यसैले होला, मैले त्यस्तो आदर्श दुलही अहिलेसम्म देखेकै छैन　।
तपाइंलाई आएको बिहेका प्रस्ताव कस्ता थिए ? कस्तो लाग्यो ?
सामान्य, जस्तो अरूलाई पनि आउँछन्　। एउटा प्रस्ताव मलाई याद छ, पहिलोपटक एउटा केटा मलाई हेर्न आएका रहेछन्　। मामुले मलाई बैठकमा बोलाउनुभयो, म हातमा लठ्ठी हल्लाउँदै　भित्र पसेँ र आमालाई ग्वाम्म अँगालो हालेँ　। टेबुलमा रोटी थियो झिकेर खाइदिएँ　। हाँसेर गफ पनि गरेँ　। उनीहरू त मलाई देखेर छक्क परे　। त्यसवेला केटा निकै नर्भस भएका थिए　। साँझ आमाले मलाई सोध्नुभयो, 'त्यो केटा कस्तो लाग्यो ?' भनेर　। मैले सोझै भनेँ, 'म बिहे गर्दिनँ　। अहिले नै त्यस्तो कुरा नगर्नूस्　।' त्यसपछि मेरो जीवनले अर्कै मोड लियो　।
त्यसपछि बिहेका कस्ता-कस्ता प्रस्ताव आए ? किन अस्वीकार गर्नुभयो ?
त्यसपछि अनगिन्ती आए　। सबै क्षेत्रका केटा आएका थिए　। म हाँसिदिन्थे, कुरा गरिदिन्थेँ　। तर, प्रेमी बनाउँदै हिँडिनँ किनभने मेरो सानो निर्णयले पनि मेरो लक्ष्यमा पुग्न अवरोध हुन सक्थ्यो　।
हिजोआजका दुलही कस्ती हुनुपर्छ ?
सक्षम　। किनभने भोलि ऊ नयाँ सन्ततिको आमा बन्नेछ　। अर्का कुरा, उसले परिवार र प्रेमलाई सन्तुलित राख्न पनि सक्ने हुनुपर्छ　।
तपाइंले प्रेम गर्नुभएको छ ?
गर्‍या छु　। मैले जसलाई प्रेम गर्छु, अति नै गर्छु　। र, उसलाई सम्मान पनि गर्छु　।
प्रेमीको सामीप्यमा बस्दा कस्तो कुरा गर्नुहन्छ ?
सामीप्यमा त बसिँदैन　। बसियो भने पनि बौद्धिकस्तरको कुरा हुन्छ　। देश र राजनीतिको कुरा हुन्छ　। अलिअलि मायाको कुरा त हुने नै भयो　।
सुहागरात सम्झनायोग्य बनाउन के गर्नुपर्ला ?
मेरो विचारमा त सुहागरातका लागि बेडमा सिस्नो राखिदिनुपर्छ　। जब दुलाहालाई सिस्नोले पोल्छ, त्यो रात जीवनभरि नै अविस्मरणीय बन्नेछ　।
सुहागरात कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
आकर्षणपूर्ण　। सुखद्, अविस्मरणीय होस् भन्ने चाहन्छु　। मेरो मात्रै होइन सबैको चाहना त्यस्तै हुन्छ　।
सुहागरातका लागि कुन स्थान बढी उपयुक्त होला ?
स्थानले खासै फरक पार्दैन　। दुवैबीच अगाध माया र आकर्षण छ भने सुनसान जंगल या झुपडीमा पनि सुहागरात सुखद् हुन सक्छ　। दुवैबीच आत्मीय प्रेम छैन भने जस्तो ठाउँमा गए पनि त्यसले केही महत्त्व राख्दैन　।
बिहेका पाँच फाइदा र बेफाइदा ?
१. सुख-दुःख साटासाट गर्न पाइन्छ　।
२. नयाँ सृष्टि सुरु हुन्छ अर्थात् सन्तानको जन्म हुन्छ　।
३. प्रगतिका लागि आवश्यक सहयोग प्राप्त हुन्छ　।
४. अनुशासित समाज निर्माण हुन्छ　।
५. विवाहले यौनलाई अनुशासित बनाइदिन्छ　।
१. पारिवारिक झन्झट　।
२. बिहे असफल भएमा भोग्नुपर्ने पीडा दुःखदायी हुन जान्छ　।
३. अनावश्यक रूपमा जनसंख्या वृद्धि हुन्छ　।
४. समझदारी नभएमा प्रगतिमा बाधा हुन्छ　।
५. अनावश्यक रूपमा नारीको स्वतन्त्रतामाथि हनन हुन सक्छ　।
Posted by नेपालको सम्झना at 1:07 AM
0 comments to “हेर्नुस त कोमल वली त दुलईको भेषमा चिरीच्याट्ट पर्नु भएछ नि”